“DOORASHADA TURKIGA” -Qalinkii:- Mustafa Maxamed Cali Caadle | Somali National Television - sntv.so
Home MAQAALLO “DOORASHADA TURKIGA” -Qalinkii:- Mustafa Maxamed Cali Caadle
“DOORASHADA TURKIGA” -Qalinkii:- Mustafa Maxamed Cali Caadle
1. Waa doorashadii ugu horraysay oo hal maalin la isla dooranaayo xildhibaannada iyo madaxweynaha Turkiga, sida uu nidaamka cusub qabana hadda kadib hal mar ayaa la isla dooran doonaa.
2. Kuraasta baarlamaanka oo 600 ah waxaa u tartamaaya 4,851 musharrax oo ka kala socda 8 xisbi, halka 68 musharrax ay si madax bannaan u tartamayaan.
3. Xilka madaxweynaha waxaa u tartamaaya 6 musharrax oo mid kamid ah uu xabsi ku jiro. Madaxweyne Erdoğan wuxuu u sharraxan yahay xulufo seddex xisbi ka kooban. Isbahaysi mucaarad ku ah oo seddex xisbi ka kooban iyagana seddex musharrax oo 3da xisbi ka kala socota ayaa u tartamaysa, waxayna noqotay wax lama filaan ah in xisbiyo aad u kala aragti duwan oo calmaani iyo islaami ah ay isbahaystaan.
4. Codbixintu saakay 08:00 saac ayay bilaabatay, sida qorshuhu yahayna waxay ku eg tahay galabta 17:00 saac. Natiijada waxaa la filayaa in lagu dhawaaqo caawa 00:00 saac kahor.
5. Tirada codbixiyeyaasha la filaayo inay codeeyaan waa 56,322,632 oo qof oo ku kala codayn doona 180,065 sanduuq. Waxaa hore u codeeyay qurba joog dibadda ku nool oo gaaraysa 1,443,585 qof, nus kamid ah waxay ka codeeyeen Jarmalka, waana tiradi ugu badnayd ee qurbajoog Turki ah oo codaysa.
6. Doorashadaan waxyaabaha ku cusub waxaa kamid ah “sanduuqa dhaqdhaqaaqa” kaas oo muwaaddiniin 17 kun kor u dhaafaya oo sariir saaran halka ay joogaan (guri ama isbitaal) loogu tagaayo si ay codkooda u dhiibtaan.
7. Doorashada waxaa kormeeraya kormeerayaal 500 gaaraya oo ka kala socda 48 dal iyo 635 wariye oo 34 dal ka kala yimid.
8. Haddii musharraxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha uu midkood heli waayo wax ka badan kalabar (50%+1) codadka la dhiibtay, labada musharrax ee ugu codadka badan ayaa wareeg labaad tartami doona 8da Luulyo, 2018.
9. Arrimaha ugu muhiimsan oo ay musharraxiintu ku kala duwan yihiin dhanka arrimaha gudaha waxaa ugu wayn nidaamka dawladnimo oo ay mucaaradku u arkaan inuusan dalka munaasib ku ahayn uuna ka tarrjumaayo kalitalisnimo iyagoo ballanqaaday in haddii ay guulaystaan nidaamki hore ee baarlamaaniga loo noqon doono. Siyaasadda dhaqaalaha iyo qaxootiga Suuriyaanka ah ayaa iyagana kamid ah arrimaha ugu waawayn oo ay xisbiyadu isku hayaan. Dhanka arrimaha dibadda waxaa ugu muhiimsan dagaalka uu Turkiga uga jiro Suuriya iyo dawladda Bishaar Al-asad, ku biirista midowga Yurub iyo deeqaha uu Turkiga siiyo dawladaha shisheeye.
10. Inta wareeg oo ay doontaba ha noqotee, waxaa la saadaalinayaa in doorashada uu madaxweyne Erdoğan ku guulaysto. Waxaa xusid mudan in saamaynta natiijada doorashadan aysan ku ekaan doonin Turkiga oo kaliya oo ay sidoo kale saamayn doonto gobalka oo dhan iyo dunida islaamka. Natiijo khayr qabta Alle haka soo saaro.
W/Qoray:- Mustafa Maxamed Cali Caadle oo ah Aqoonyahan saldhiggiisu yahay magaalada Ankara ee dalka Turkiga oo ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Previous articleWasiirka Waxbarashadda oo daahfuray Imtixaanka Shahaadiga ah ee Beledweyne
Next articleDuqa Muqdisho oo xariga ka jaray xarun caafimaad oo laga hirgeliyay degmada Wadajir ee G/Banaadir
Tartamayaasha Degmada Yaaqshiid oo caawa u soo gudbay wareegga kama dambeysta ah (Final) ee tartanka
Taliska booliska oo faah faahin ka bixiyay qaraxii caawa
Faah faahin ka soo baxay qarax caawa ka dhacay Muqdisho
Tartamayaasha Degmada Yaaqshiid oo caawa u soo gudbay wareegga kama dambeysta...